I-Legendary Royale Apk Ukulanda Kwe-Android [Igeyimu ye-LR] - I-Luso Gamer
I-Legendary Royale Ukulanda Kwe-Android [Igeyimu ye-LR]
I-Clash Royale ithathwa njengomlandeli we-Clash of Clans. Izinhlamvu nezici ezibalulekile zigcinwa zifana kodwa ngaphakathi kwe-CR imibhoshongo yengezwa ngokungeziwe. Nokho, izinsiza eziningi ezifinyelelekayo zochwepheshe zikhiyiwe. Ukuze ujabulele izinsiza ezingenamkhawulo silethe i-Legendary Royale.
Empeleni, ngaphakathi kwale nguqulo ye-mod, zonke izici ze-pro ezifaka izinsiza zigcinwa zingenamkhawulo. Okusho ukuthi manje abadlali abakaze badinge ukuthi bakhathazeke ngezinsiza ezibalulekile. Okusiza abadlali ekwakheni amabutho anamandla neziphonso.
Ngoba zonke izinsiza ezibalulekile ezihlanganisa Amagugu, Izinhlamvu zemali kanye Namaphuzu Empi agcinwa emkhawulweni wawo wokugcina. Ngakho-ke ukhathele ukudlala inguqulo esemthethweni usesha inguqulo elungisiwe yokudlala. Bese sincoma labo badlali bamageyimu ukuthi bafake i-LR Umdlalo we-Mod.
Iyini i-Legendary Royale Apk
I-Legendary Royale Android inguqulo eshintshiwe ye-Royale Clash esemthethweni. Lapho izinsiza nezinto ze-premium zivulwe ukuze zisetshenziswe. Ngaphandle kwezinsiza ezibalulekile, amaqhawe nezinye izinketho ezidingekayo ziyatholakala ukuze zilungiswe.
Uma sihlola inguqulo esemthethweni yohlelo lokusebenza lokudlala. Sithole umdlalo wegeyimu ukhanga futhi unemikhawulo futhi. Ngoba izici eziningi ezifinyelelekayo ngaphakathi komdlalo wegeyimu zifakwe ngaphakathi kwamafolda namabhokisi anemingcele.
Ngemva kokufinyelela lawo mabhokisi namafolda kuzovumela abadlali ukuthi bajabulele izinsiza. Ukuvula lawo mabhokisi kudinga izinsiza eziyinhloko njengezinhlamvu zemali zegolide namagugu. Ngaphandle kokuba noma iyiphi yalezi zinsiza kuzokwehlisa amathuba okuvula amabhokisi.
Ukuze uthole lawo magugu ambalwa kungase kudinge ukutshalwa kwezimali kwamakhulu amaRandi. Lokho kuthathwa njengokubizayo futhi okungathengeki kubadlali abamaphakathi. Ngakho-ke uma kucutshungulwa ukufinyeleleka kanye nesicelo sabadlali, abathuthukisi balethe i-LR Apk.
Igama I-Legendary Royale
Usayizi 5.3 MB
Unjiniyela I-Super Slash
Igama lephakheji com.superslash.coreroyale
Isigaba Imidlalo - Isu
Okumahhala ukulanda kusuka lapha ngokuchofoza okukodwa. Inqubo yokufaka nokudlala umdlalo we-mod ilula. Okokuqala, abadlali bayacelwa ukuthi balande inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lokudlala lwe-mod ngokuchofoza okukodwa.
Uma ukulanda sekuqediwe, manje qalisa inqubo yokufaka futhi ujabulele izinsiza ze-pro. Khumbula ukuthi ukufinyelela kudeshibhodi enkulu akusoze kwadinga ukubhaliswa noma ukubhalisa. Izonikeza ngokuzenzakalelayo ukufinyelela okuqondile kokudlala kwegeyimu okuyinhloko.
Izinsiza ze-pro ezifinyeleleka ukufinyelela ngaphakathi kokudlala kwe-mod Amagugu, Izinhlamvu zemali Zegolide kanye Namaphuzu Empi. Zonke izinombolo zigcinwa ukuze zigcine umkhawulo. Ngisho nezinto zokubala zizovuselelwa njengoba abadlali bethula igeyimu noma beyiqala kabusha.
Khumbula usebenzisa i-Gems nezinhlamvu zegolide ezifanayo, abadlali bangavula lezo zinto ze-pro ezifana namabhokisi amakhulu. Ukuvula lawo mabhokisi kuzosiza ukuzuza imivuzo engapheli njengamaqhawe, izikhali nemiphumela. Enye into, imiklomelo ezuziwe izokwengezwa kudeshibhodi ngokuzenzakalelayo.
Inketho yabadlali abaningi isabukhoma futhi umdlalo usingathwe phezu kweseva yangasese. Lokhu kusho ukuthi inkinga yokuvinjelwa noma yokuvinjwa izoqedwa unomphela. Ngakho-ke uyawuthanda umdlalo futhi uzimisele ukudlala nabangani bese ufaka i-Legendary Royale Download.
Kulula ukufaka nokudlala.
Ukuhlanganisa uhlelo lokusebenza lokudlala kunikeza izinsiza ezingapheli.
Lezi zihlanganisa Izinhlamvu Zegolide, Amagugu kanye nama-BP.
Ikhawunta izovuselelwa njengoba abadlali beqala kabusha umdlalo.
I-interface ye-gameplay igcinwa ifana neyokuqala.
Amaseva angasese asetshenziselwa ukusingatha umdlalo.
Ungalanda Kanjani I-Legendary Royale
Esikhundleni sokugxumela ngqo ekufakweni nasekusetshenzisweni kohlelo lokudlala. Isinyathelo sokuqala ukulanda futhi ngalokho abasebenzisi be-Android bangathembela kuwebhusayithi yethu. Ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sinikeza kuphela amafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo.
Ukuqinisekisa ukuthi abadlali bazojatshuliswa ngomkhiqizo olungile. Sifaka umdlalo kuma-smartphones ahlukene. Ngemva kokufaka igeyimu kumadivayisi ahlukene, sikuthole kuvikelekile ukuyifaka nokuyidlala. Ukulanda uhlelo lokusebenza lokudlala lwe-mod sicela uchofoze isixhumanisi esinikezwe ngezansi.
Ingabe Kuphephile Ukufaka I-Mod Apk
Ngaphambi kokunikeza amafayela e-Apk ngaphakathi kwesigaba sokulanda, sesivele siwufakile umdlalo we-mod kumadivayisi ahlukene. Futhi awukwazi ukufakaza noma iyiphi inkinga ebucayi. Nokho, asilokothi siphoqe abadlali bamageyimu ukuthi bafake igeyimu ye-mod. Ngisho nathi asikaze sibe ngabanikazi bamalungelo okushicilela, yingakho faka futhi udlale umdlalo we-mod ngokuzifaka engozini.
Ezinye izinguqulo ezihlukile ze-Clash Royale ziyatholakala ukuze uzilande kuwebhusayithi yethu. Uma uthanda ukudlala leyo eminye imidlalo ye-mod bese ufaka i-Apk elandelayo. Okukhona I-Master Royale Apk futhi I-Master Royale DM Apk.
Ngakho-ke uyathanda ukudlala i-Clash of Royale nabangani kodwa awukwazi ukuncintisana ngaphakathi kwenkundla yempi ngenxa yokuntula ulwazi nezinsiza. Ungakhathazeki ngoba nakhu sibuyile nomdlalo oshintshiwe. Manje ukufaka i-Legendary Royale kuzovumela abadlali ukuthi bajabulele izinsiza ezingapheli.
Izigaba Isu, Imidlalo Amathegi I-Legendary Royale, I-Legendary Royale Android, I-Legendary Royale Apk, I-Legendary Royale Download, Umdlalo we-Mod Imeyili kwemikhumbi
Ukulanda kwe-Cute Cut Pro kwe-Android [Yakamuva ngo-2022]
Ungayilanda Kanjani I-PES 16 Apk Yamahhala Ye-Android 